एमसीसी पास भएपछि चिनियाँ राजदूत यान्छी वेपत्ता, के हो यर्थाथ ? — Sanchar Kendra
एमसीसी पास भएपछि चिनियाँ राजदूत यान्छी वेपत्ता, के हो यर्थाथ ?
काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास भएपछि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीलाई ठूलो झड्का लागेको छ । एमसीसीका कारण उनि तनाव रहेको बुझिएको छ
प्रतिनिधिसभाले एमसीसी अनुमोदन गर्नु अघिल्लो दिनसम्म पनि यान्छीको सक्रियता कम थिएन । तर, अहिले उनी एकाएक भूमिगत भएकी छन् ।
नेपालमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने नगर्ने भन्ने तीव्र बहस र छलफल चलिरहेका बेला यान्छीको सक्रियता निकै बढेको थियो । उनी एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग नियमित सम्पर्कमा थिइन् ।
कतिसम्म भने त्यही बेला उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूको एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भिडियो कन्फ्रेन्ससमेत गराइन् ।
एमसीसीलाई असफल बनाउनकै लागि त्यो हथकण्डा प्रयोग गरिएको हो भन्ने सबैले बुझकै थिए । यान्छीले माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल, एमाले नेता भीम रावलको पनि भरपूर उपयोग गरेकी थिइन् ।
एमसीसी पास भयो भने अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भनेर कुप्रचार गर्न लगाइएको थियो । आर्थिक सहयोगलाई पनि संसदले अनुमोदन गर्न मिल्छ भन्दै नेपाली कम्युनिस्ट नेताको दिमाग भुट्न थालेको चीन अहिले चुप छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले एमसीसी अनुमोदन भएपछि ‘नोटेड’ गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । यता, काठमाडौंमा रहेकी होउ यान्छी भने ‘भूमिगत’ छिन् । उनको सक्रियता कतै पनि देखिन्न ।
चीनले लामो समयदेखि नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएको विषयमा सम्पूर्ण नेपाली जानकार छन् । त्यसमा पनि हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि मिचेको चर्चा चलेपछि त चिनियाँहरूको मुकुण्डो उत्रिएको छ ।त्यही भएर अचेल चीनले नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको भर गर्न नहुने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ ।
अमेरिका र चीनले गरेको ‘नोटेड’ को अर्थ के हो ?
एमसीसी लिनैपर्छ भनेर दबाब दिने अमेरिका र एमसीसी नलेऊ भनेर दबाब दिने चीन दुवैले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरेको घटनाको प्रतिक्रिया एउटै शब्द जनाए– नोटेड । दुवै देशले एमसीसी र व्याख्यात्मक घोषणाको अनुमोदनलाई ‘नोटेड’ गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
कूटनीतिमा ‘नोटेड’ शब्दले के आशय व्यक्त गर्छ त ? पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाले भने, ‘यसलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हिसाबबाट लिन सकिन्छ ।’ तर, अमेरिकाले ‘नोटेड’ भनेर कार्य एक कदम अघि बढेको संकेत दिएको बुझाई थापाको छ ।
‘नोटेड भनेको एक कदम अगाडि हो । एमसीसीको विषयमा नेपालको प्रयासलाई नोट गर्‍यौं भन्ने हो,’ थापाले भने, ‘धेरै वादविवादपछि एमसीसी संसदले अनुमोदन गर्‍यो । त्यही प्रक्रियालाई अलिकति प्रोत्साहन गर्न ‘नोटेड’ भनेको हो ।’
नेपालले ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्दा भारतले यसैगरी असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसअघि संविधान जारी गर्ने मिति पछि सार्न र संविधानमा समेटिएका केही विषयवस्तु फेर्न भारतले नेपालमाथि दबाब दिंदै आएको थियो ।
भारतीय दबाबको बेवास्ता गर्दै नेपालले संविधान जारी गरेपछि भारतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनालाई ‘नोटेड’ गरेको जनाएको थियो ।
त्यसपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । ‘अहिले एमसीसीका विषयमा अमेरिका नोटेडभन्दा बढी जान सक्ने ठाउँ भएन ।
एक किसिमले हेर्दा भएको गतिविधिलाई हामीले राम्रोसँग हेरेका छौं भन्ने अर्थ यसले दिन्छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले भने । विदेशमन्त्रीले नै टेलिफोन गरेर ‘नोट’ गरें भनेको कुरालाई प्रोत्साहनका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।